10 Kudzidzisa Kuurayiwa Kwekufa muSystem Testing inokuita iwe millioneire
Kuedza mazuva ano mapurogiramu / software, sezvikwata zvebasa / hybrid, cloud computing, & mobile platforms inounza matambudziko emazuva ano ekugadzira mapurogiramu ekuongorora mapurogiramu, akawanda ayo asina hutano hwakakodzera uye ruzivo kuti rwukwire kumatambudziko. Innovative Technology Solutuions inopa zvakakwana kushandiswa kweIndaneti kuongororwa Kurovedza sarudzo & Certification kukubatsira iwe kuunza maitiro ehupamhizha nekukura kwebhizimisi rako.
Tanga ku Testing
HP QTP UFT 11.5x inokosha
HP Kushandisa Lifecycle Management (ALM)
10 Kudzidzira Kuurayiwa Kwekufa muSystem Testing & Certification
Vateereri Vanoteerera KuSelenium
2. Software Testing Training
Zvinangwa zveSoftware Testing
Vateereri Vanotarirwa neIndaneti Testing
Zvinangwa zve HP VuGen v11.5
Vateereri Vakatarirwa ne HP VuGen v11.5
4. HP Kuronga Kudzidzira
Vateereri vanoteerera ye HP Trim Training
Zvinotarisirwa neHigh Trim Training
Zvinangwa zve HP Tipping Point
Vateereri Vakatarirwa neHT Tipping Point
Zvinoda zve HP Tipping Point
6. HP QTP UFT 11.5x inokosha Kudzidziswa
Zvinangwa zveUFT Training
Vateereri Vanotevedzwa yeUFT Training
Zvido zveUFT Training
7. Takura Runner v11.5 Training
Zvinangwa zveStack Runner v11.5 Kudzidzisa
Vateereri Vanotarirwa neScack Runner v11.5 Kudzidzisa
Zvinangwa Zveruzivo Mudziviriri
Vateereri Vanotarirwa Nedzivo Mudziviriri
Chinodiwa Kuti Uwane Mashoko Mudziviriri
9. Kushandisa Upenyu Hwakanaka Hwakadzidziswa
Zvinangwa zveKushandisa Upenyu hwekudzidzisa Maitiro
Vateereri vekutarisa kweKushandisa Upenyu hwekudzidzisa Maitiro
10. Software Testing - Automation
Software Testing - Automation Program inopa:
Yakabatanidzwa pamwechete Kuedzwa kweKushanda (UFT / QTP):
Virtual User Generator (VuGen):
Simba Runhambwe (LR):
Kushandisa Lifecycle Management (ALM):
Vateereri Vanotarirwa Zvekuongorora Testwe - Automation
Selenium inoshandiswa-yakabva kune imwe nzvimbo uye ine shanduro yakashandura s / w s / w iyo inoshandiswa pakuedza automation (web applications). Inobvumirwa pasi peApache License 2.0. Selenium inowanikwa yezvigadzirwa zvinobatsira mukuchanizing chete web applications. Ichi chidzidzo chekudzidzisa chichakupa kumusoro kusvika pasi kunzwisisa kweSelenium nemashandisirwo ayo akaenzana uye kushandiswa kwavo.Iine zvigadziro zvekushanda nenzira dzakasiyana-siyana pamusoro pehutano hwakasiyana-siyana uye mapurogiramu. Selenium haisi yega yega yega asi pane urongwa hwemapurisa anobatsira vaongorori kuti vashandise zvigadzirwa zvemagetsi zvakanyatsoshanda uye zvakajeka.
Selenium is compact programming testing framework for web applications. Iyi ikirasi yakakwana yekuraira yekuenzanisa kwemashandisirwo kusanganisira kusanganisa kuongororwa kwakaenzaniswa, kusangarirwa kuSelenium IDE uye kuiswa kwayo, Selenium IDE pfungwa, Selenium RC, Testeleni, Dhiyabhorosi Mabasa, Chimiro uye Selenium Grid nezvimwe zvakadaro.
Selenium isiri yakasununguka.
selenium Inogona kushandiswa kunze kwekufambira mberi kwakasiyana kunofumura DOM.
Iine kodzero yekuita zvinyorwa zvinyorwa pamapurogiramu akasiyana-siyana.
Inogona kuita zvinyorwa pamashandisirwo akasiyana akashanda.
Selenium bolsters cell phone.
Anopedza miedzo mukati megurogiramu, saka nheyo haII inodiwa apo script execution isati yapfuura.
Inogona kuita zviongero zvakafanana nekushandiswa kweSelenium Grids.
Iyi yekudzidzisa maitiro inogadzirirwa kuongorori mazano ekuongorora avo vangada kutora mune zvinokosha zveSelenium kuburikidza nemifananidzo inoshanda. Dzidziso yekudzidzisa inenge yakagadziriswa yakakwana kuti ikure iwe neSelenium kubva kwaunogona kuzvitora kune huwandu hukuru hweunyanzvi.
Usati waenderera mberi nemutambo uyu wekudzidzisa, iwe unofanirwa kunge uine kunzwisisa kunokosha kweJava kana chero umwe mubvunzo wakaronga chirongwa chemazwi. Saizvozvowo, iwe unofanirwa kuva neruzivo nezvakakosha zvekuedza pfungwa.
Dzidzo iyi inowedzera pamusoro pemiti uye mabhotsheni eZero Testing izvo zvichakubatsira kuti uwane ruzivo rwekuyera, mienzaniso, uye nzira kuitira kushanda mumashandisi ekuongorora software.
Iyi dzidzo inotsamira pakugara mamiriro ezvinhu, izvo zvinobatsira kunzwisisa maonero ekuedza, SDLC, STLC, kuongorora kwekunyora uye zvidzidzo zvakasiyana-siyana zvinokosha kuti zvishande pamwe nekuedza kuongorora. Iyi dzidzo inotarisana nekuziva zvidimbu zvekushandisa, kusarudza maitiro akasiyana ekuongororwa, mushure mekunge vatengi vaenda kune marudzi akasiyana-siyana ekuongororwa kuti vaongorore kushandiswa kwemashandisirwo anobatsira uye asingabatsiri, uye vanozogadzirira zvidzidzo uye mamiriro ekuedzwa kuti vaongorore kushandiswa nekona imwe neimwe , pakupedzisira ichapedza kubvisa uye kubudisa zvinhu zvinowanikwa pamusoro pekugadzirisa kwekuedza kuedza.
Zivai zvinyorwa uye zvinoreva kushandiswa kwepurogiramu uye mitemo yayo
Kusiyanisa zvakasiyana-siyana zveSADLC
Unyore nzira yekuedza yekuzadzisa bhizinesi zvinoda
Kusiyanisa test test execution handle
Zvinoshandisa dambudziko rehutungamiri uye uone kuti rinoshanda sei pakuongorora software
Kushandisa zvinyorwa uye zvinyorwa zvinoshandiswa kujekesa kuti kuve nokubudirira
Kusiyanisa maitiro asina kuongororwa maitiro
Kusiyanisa kupinza kuongororwa pfungwa
Chero ani zvake anenge ari muchengeti anodiwa kutanga kutanga basa mukuongorora software
Kuziva Zivo pamusoro
Sites uye purogiramu
Kuedzwa kwekufa kunoda kufanana. kushanda ku SUT kuisa stack, iyo inotambudza kana imwe inogona kusvika pedo ne30% -40% yemugumisiro wekuuraya nemabasa ekushandisa. Kuti urove mamiriro ezvinhu aya uye kuti uwane chero chero yeiyo 90% -95% yemugumisiro wechirongwa, kuurayiwa kashandise kushandisa VuGen kuita Vuser scripts.
Vugen anorondedzera kubatana pakati pe Client / Server (kutaurirana), kuti abate kutumira uye kugamuchira ruzivo. Rinoshandisa mushanduri wechiD C kuti anyore nzira ye SUT, iyo inogadzira C script. Pakutanga inotanga nekunyora mabasa kuitira kuti tive nemafambiro ekuita uye basa revashandi vese vanoshanda muC / S engineering.
Mushure mokunge script yakanyorwa ichitsanangurwa, zvino inoshanduka pakuvandudza kwe script mukuti iyo Parameterize (Prevent Data Caching) uye inoita Kuongorora kunotarisa (Checks Server Response). Izvi zvinosanganisira kunzwisisa uye kugadzirisa mune script. Iyi nzira yeVugen yakagadzirirwa kupa maoko-pakushandisa ruzivo rwekutarisa maitiro ekushandiswa pasi pemutoro unorema uchishandisa makambani ekushandisa.
Kudzidza kunokosha izvo zvinosungirwa kuti zviongorore mutoro
Ziva zvikamu zveLoadRunner (LR)
Shandisa iyo yakagadzirirwa basa rekuita kuti uwane mamiriro anokosha eRR
Nyora zvinyorwa mumusiya wekushandisa uchishandisa Virtual User Generator (VuGen)
Edzai matanho uye mafomu ebhizinesi uchishandisa kugoverana
Parameterize zvinyorwa kuti zviparadzanise ruzivo rwevatapi vemashoko
Nyora zvinyorwa zvinyorwa kuti uratidze ruzivo rwebazi-rakagadzirwa
Kushanda neRendezvous kubudisa mashizha akawanda pane imwe nzira
Quality Assurance Engineer uye Performance Engineers.
Kune vatsva vatsva vanodikanwa kugadzira zvinyorwa kuti vaone web application.
Vashandi vanoita basa rekuedza kuongorora.
Masitemu uye zvirongwa zvepurogiramu.
C purogiramu dialects.
Idea of ​​Client / Server engineering.
Hp Trim inowanzonzi Record Record. Iyi HP Trim course yakagadzirirwa kubatsira vatungamiri kuronga, kuronga nekugadzirisa matanho emabasa muna HP Records Manager. Nhengo dzichaita basa rinoenderana nemasangano avo.
Inowedzera asi haisi kumanikidzirwa, zvinyorwa zvevatungamiri, vatungamiri vekutarisira, vashandi vepamusoro vebhizimusi uyezve kuwedzera vashandi pamwe navo
Kuguma kunobudirira kweMugumo Mugadziri wekugadzirira kana kuenzana kwehuwandu hwemwedzi ye6 kana kuti kunyanya kushandisa HP TRIM kana HP Records Manager mune imwe nzvimbo yeruzivo.
Kudzidza kwezvinyorwa zvinyorwa zvinoshandiswa uye maitiro emabhizimisi emukati
Izvi maoko panzira inoratidza pfungwa uye zvakanakisisa zvinokosha zvakakosha pakugadzira, kurongeka, sangano rinosungirirwa uye kuchengetedzwa kwehutano hweTypping Point urongwa. Nekutaura kwakanaka nemaoko nemaitiro ekudzidzira, nhengo dzichaona nzira yekuita nayo Intrusion Prevention System (IPS) uye Security Management System (SMS).
Mukupera kwekupedzisira iyi HP course, iwe unofanirwa kuva nekwanisi kuita izvo zvinotevera:
Shandisa pfungwa huru yekuchengeteka
Ngwarira Kushandiswa Kwekuchengetedzwa kwenyika nekugadzirisa nekugadzira
Ngwarira kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekuchengetedza nekugadzira
Taura kuronga uye mamiriro ezvinhu
Ngwarira zviremera zvinogamuchirwa maitiro
Rongai injini, kuronga vashandi, kuronga vatungamiri, vatariri vekuchengeteka, vatungamiri vegadziriro, vanogadzirisa zvigadziri, vanogadzirisa nzira dzekuchengetedza uye kuronga vakagadziri.
Sirimi yepurazi kuronga kuuraya uye kutonga kunodzokorora
Gadziriro yekudzidza yehutano nekuchengetedzwa kwekushandisa maitiro
Kubatanidzwa ne Network Network kunodzokorora
Dzidzo iyi inowedzera pamusoro pebasa rinokosha reUnited Functional Testing iro richakubatsira kuti uuye mune shanduro yekuongorora shanduro ine ruzivo rwekushandisa robotization test instrument rinoshandiswa. Pamberi pezvimwe zvose zvidzidzo zvichatanga nerekodha uye kutamba muchikamu, nhengo dzichadzidza mano ekuita zvinyorwa zvitsva, shandura zvinyorwa zvekuvandudza kuongororwa. Mukuvandudza, izvo zvinosanganisira kunzwisisa uye kugadziriswa mune script, kusanganisira kuenzanirana, mahofisi ekuongorora, nekugadzirisa.
Gare gare muchikoro, nhengo dzinogamuchira mitemo inowanzotorwa nevanokurudzira sezvavanotsanangura zvakanyanya kupimwa script scripts. Kuwedzera kushandiswa kwezvekugadzirisa kwavanoita vachaita mabasa anoshandiswa, mabasa ekuraibhurari, uye pamwe chete mubvunzo wemabhuku, nhengo dzichave dzakagadziriswa zvakakodzera zvakagadzirirwa kuedza chero chero rudzi rwekushandisa.
Ita maitiro makuru ekuenzanisa script script uchishandisa bhuku rekuedza
Kuvandudza kuongorora kwakakosha kuburikidza nekugadziriswa panguva yekurekora uye pakupera kwekunyora
Kunyora shanduro script zvakanyanyisa kushandisa masaramiro
Kuita mabasa achigadziriswa uye kuchinjeka kuitira zvimwe zvinyorwa zvinyorwa
Kushandisa Chinangwa Repository
Kutora pfupa paOject Identification uye kuchinja kusiyanisa uchapupu hwehupfumi hwezvinhu
Kushanda Nezvimwe zvinhu kuitira kuti zviwedzere kusimba
Kushanda nemaonero akasiyana-siyana eUFT
Kuita tsika yekuongorora chekuita kuti uone kushanda nekambani yekuona maonero
Runing AUT uye UFT kuburikidza nekushandisa kuenzanisa uye zvikamu zvakasiyana zveUFT
Kupfuura kusiyana kwakasiyana kwevatengi kushandisa parameter
Kuchengeta replay nguva yenguva yekuziva munguva yekukwira-nguva inogona kuwanikwa
Kushanda ne test rundown
Kune vatsva vashandi vanoda kuchinja kubva pakugadzira kuenda kumotokari yekudzidzira mabhoti uchishandisa UFT
Nokuda kweUnited Assurance Engineer uyo anofanirwa kuratidza chimiro che Team kutungamira nekushandisa UFT
Kuziva Zivo ye:
Masitemu uye zvirongwa zvepurogiramu
Discretionary Experience na:
Kuita kuedza kusina kushanda sekuenzanisa kuongororwa, kuongororwa kwevashandi vanoshandisa zvishandiso zvemichina seLoadRunner. Inoshandiswa kubudisa chaiyo pamusoro peServer kuti uone kushandiswa kweSUT (Server under test). LoadRunner ibhodhi software ine zvikamu zvitatu zvema software:
Stack Runner inopa simba kuuraya analyzer kuti iite Vusers (Virtual Users) kuisa mutoro wakakura pamaseva pamusoro pemhando dzakasiyana dzekuedza kuedza sekutakura kuongororwa, kuongororwa kwepfungwa, kuedza kutsungirira, kuongorora kwevhoriki nezvimwe zvakadaro.
Nheyo inokosha inotarisirwa kuedza kuongorora
Kushandisa zvinyorwa zvakashandiswa kushandisa VuGen, kuronga matambo-nguva, kushanda nemaitiro ekuronga, kuunza Generad Load (LGs), uye kuwedzera nhamba ye Virtual User (Vusers) yemamiriro ezvinhu eRR mushure mezvinangwa zvekuenzanisa kwemajeri
Tora chiyero chechirongwa pamushandi wako nekushanda mamiriro ezvinhu
Kushanda nemachati uye mupepeti uchishandisa kuongorora
Dare rinosangana nemutoro wekutengesa nzira.
Iyi dzidzo inopa ruzivo rwekutanga kupa simba ekuchengetedza vatariri kuronga uye kutarisira HP Data Protector software. Maoko-pairi maitiro anosimbisa zvirongwa zvekufungidzira kuti ave nechokwadi chekunyatsonzwisisa kwekusimbisa nekugadzirisa pfungwa, kubatsira kwe software uye yekushanda kwayo kushanda kwemagetsi kuvhara kuparadzwa.
Taura uye ushambadzire HP Data Protector software munzvimbo yako yega kana kutamba kubhadharwa kubva kune imwe yekare yakadhindwa HP Data Protector.
Saronga HP Data Protector software software.
Ronga Tape yako uye Disk based Backup mhinduro kuti ishandiswe ne HP Data Protector software.
Shandisa HP Data Protector software chinhu kuti usimudzire, udzoke zvakare, uye skrini kubva ku GUI uye utere mutero.
Shandisa neH HP Data Protector software
Unyanzvi uye hurumende vatungamiri vachishandisa HP Data Protector software.
Framework uye Network Administration kana zvakaitika zvakafanana.
Nokuda kwezvinhu zvinokosha uye zvido zvekuita chero chipi zvacho chezvimbiso zvakabatana, ona chinyorwa chekusimbisa pamusoro pe HP ExpertOne site.
Iyi nzira yeAMI inonyanya kuisa pamiti uye mabhoti eKushandisa Lifecycle Management iyo ichakubatsira kutarisira kupedzisa upenyu hwekushandisa nekufambira mberi uye kuedza nzvimbo. Kutanga uye mberi kwekutanga hurumende inotanga kubviswa paChipatimendi cheKushandisa Lifecycle Management iyo inobvumira mutengi kuti aite uye atarisire mishonga uye vatengi pamwe chete nekodzero dzevatengi. Mushure mokunge mutungamiri chikamu chikamu chingawana ruzivo rwekushanda kwekushanda kubva pakusunungurwa kwekugadzirisa nguva yekupera kweupenyu hwekupedzisira, Chirongwa chekufananidzira kushandiswa kwekushandisa, Test Plan ichave yakakosha kuronga nzira yekuedza uye mamiriro, Test Test ichabvumira vatengi kuti vatevedze kuedza kutarisira kushandiswa, Mutevedzeri wemutemo pakuita uye kutarisira kusakwana uye Dashboard kuona izvo zvichange zvichikwanisa kubudisa mitsara nematare ekuongororwa kwakanaka kwekushandiswa.
Chimiro Chekushandisa Maitiro Ekuchengetedza Maitiro (ALM)
Nyatsosiyanisa kusiyana kweA ALM interfaces
Ita kuti ubudise, kutenderera uye kuwedzera zvinodiwa
Tsvaga njodzi dzakabatana nezvinodiwa
Rongai miedzo uye zvidzidzo mumuedzo unoronga muti
Purogiramu uye ita zvirongwa
Gadzira test scripts kubva pakusarudza matanho
Ita test test, Ita zvidzidzo zvinyorwa uye zvakagadziriswa
Nyora uye nhamba yekuedza kuedza kunouya
Logyo uye mutariri anotora
Gadzira mifananidzo uye mishumo uchishandisa dashboard
Unyanzvi hwehutano hunyanzvi
Quality Center / ALM Vatariri
Zvimwe Nehutano Center / ALM vashandi vari kutarisira kutarisira mabasa, vatengi uye mabasa ekugadzirisa maitiro
Purogiramu yakatanga naH HP, inonzi HP-SU (Software University). 70% ye software kuongororwa mumusika inopedzwa nekubatsirwa kwe HP inotsanangurwa Automation apparatuses. Iyi purogiramu isinganzwisisiki pamabhizimisi yakaronga mienzaniso uye ine mazano ose anokosha uye zvigadziriswa mumunda wekuongorora sangano. Inotarisa kuongororwa kweBhuku neKushandura kweGII neAppi based applications, pamwe chete nemashandisirwo akashandiswa HP robotization apparatuses.
Mune zvimwe zvinetso zvichanyatsonzwisisa pfungwa dzekuedza kushandiswa nekunzwisisa SDLC (Software Development Lifecycle) uye kutora pfuti pa STLC (Software Testing Lifecycle). Iyi purogiramu inoratidzira zvakasiyana-siyana zveSADLC mhando uye maitiro ekuedza, maitiro akasiyana-siyana ekuedzwa, sei kuwana zvinodiwa kubva kune vatengi uye avo vari QA? Chiizve, chii icho chikamu chayo? Nguva yose iyi. Kuwedzeresa kunotarisa kuongororwa kweNengozi pamabasa anoenderera mberi uye nguva pfupi gare gare ichiita zvinyorwa zvepamusoro (Test Plan, Test Case uye RTM). Kuitwa kwekuedza kunoitwa kuti tiwane zvibereko uye tione kana tine chigumisiro chakanaka kana kwete. Isu tichafanotaura pamusoro pemhando dzekuongorora (Manual and Automation) uye nekuumba KPI (Key Key Indicators) yeKugutsikana Kwehutano.
Icho chigadzirwa chekugadzira chakagadzirwa neH HP kuti uone kukosha kweGuI kana API inoshandiswa. Sezvo iri mafashoni emichina, inogadzira VB scripts kuti iedze. Kunyengera kunodzidza matanho ekuita zvinyorwa zvitsva, gadzirisa zvinyorwa zvekuvandudza kuongororwa. Mukuvandudza, izvo zvinosanganisira kunzwisisa uye kugadziriswa mune script, kusanganisira kuenzanisa, mahofisi ekuongorora, nekugadzirisa.
Gare gare muchikoro, nhengo dzinogamuchira mitemo yakawanda yenguva yakatorwa nevanokurudzira sezvavanoronga zvimwe zvakanyanya kuedza script. Kuwedzera kushandiswa kwezvekugadzirisa kwavanoita vachaita mabasa anogadziriswa, mabhizinesi emabasa, uye zvivako zvekuchengetedza zvekugoverana, nhengo dzichagoverwa neunyanzvi hwakagadzirirwa kuongororwa pamusoro pekushanda.
Kuedzwa kwekufa kunoda kufanana. kushanda kune AUT kuisa stack, iyo inotambudza zvikuru kana imwe inogona kusvika pedyo ne30% -40% yemugumisiro wekuuraya nemabasa anoshanda. Kuti urove mamiriro ezvinhu aya uye kuti upinde mune chero chiitiko che 90% -95% yemugumisiro wechirongwa, kuurayiwa kashandise kushandisa VuGen kuita Vuser scripts. Vugen anorondedzera kubatana pakati pe Client / Server (kutaurirana), kuti abate kutumira uye kugamuchira ruzivo. Rinoshandisa mushanduri wechiD C kuti anyore nzira ye SUT, iyo inogadzira C script. Pakutanga inotanga nekunyora mabasa kuti aone maitiro uye basa revashandi vanoita basa reC / S.
Mushure mokunge script inokosha yakanyorwa, zvino inoshandiswa pakuvandudza script pakuti iyo Parameterize (Prevent Data Caching) uye inoita Kuongorora kunotarisa (Checks Server Response). Izvi zvinosanganisira zivo uye kugadziriswa mune script. Iyi nzira yeVugen inotarisirwa kuisa maoko-pakushanda ruzivo rwekutarisa mufambiro wekushandiswa pasi pemutoro unorema uchishandisa chigadzirwa chemichina.
Kuita kusingashandisi kuongororwa kwakafanana nekugadzirisa kuongorora, kuongorora kwekuuraya kunoshandisa mashandisi ekugadzira maitiro seLoadRunner. Inoshandiswa kubudisa chaiyo pamusoro peServer kuti uone kushandiswa kweSUT (Server under test).
LoadRunner ndiro bundle software ine mapuraneti matatu ezvirongwa:
Stack Runner inopa simba rekuongorora analyzer kuti iite Vusers (Virtual Users) kuisa mutoro wakakura pamashandi sekuita maitiro ekuenzanisa kwekutengesa sekutakura kuongororwa, kuongororwa kwepfungwa, kuedza kutsungirira, kuongorora kwevhoriki nezvimwe zvakadaro.
Inogadziriswa pamakungu nemabhoti eKushandisa Lifecycle Management iyo ichakubatsira kutarisira kupedzisa upenyu hwekushandisa nekufambira mberi nekuenzanisa. Pakutanga iyo tanga inotanga kubviswa paChikwata Chekushandisa Chekushandisa Lifecycle Management iyo inobvumira kuti mutengi aite uye anotarisira mabasa nevatengi pamwe chete nekodzero dzevatengi. Mushure mokunge mutungamiri chikamu chikamu chingawana ruzivo rwekushanda kwekushanda kubva pakusunungurwa kwekugadzirisa nguva yekupera kweupenyu hwekupedzisira, Chirongwa chekufananidzira kushandiswa kwekushandisa, Test Plan ichave yakakosha kuronga nzira yekuedza uye mamiriro, Test Test ichabvumira vatengi kuti vatevedze kuedza kutarisira kushandiswa, Mutevedzeri wemutemo nokuda kwekugadzira uye kutarisira maitiro uye Dashboard kuona izvo zvichange zvichiyeuchidza kubudisa mitsara nemifananidzo kuitira kuongorora kwakanaka kushandiswa.
Chero chipi nechipi chekupedza chikoro chakapfuura pasi
Kudzidza kwe SDLC kana STLC
Nhoroondo ye MS Office kana kuti software yakakosha
Comprehends Application software mafomu
Kuongorora Mazano - KwaAlm
PHP Mailer Makomeri Anouraya webhusaiti yega yega iwe usingaverengi nyaya ino
Nei Tauri? The best Data Visualization software